Nhọrọ ezi uche dị na Bits Carbide Drill Bits
site na nchịkwa na 12-08-21
A na -ekwenyekarị na a ga -eme mkpọpu ala na ọnụego ndepụta dị ala yana ibelata ọsọ. Echiche a ziri ezi otu oge n'okpuru ọnọdụ nhazi nke mmemme ndị nkịtị. Taa, site na mpụta nke ịgba carbide, echiche igwu ala agbanweela. N'ụzọ doro anya ...
Ụdị Ngwa Carbide asatọ
Enwere ike kewaa ngwaọrụ carbide ciment n'ụdị dị iche iche dịka ụkpụrụ dị iche iche si dị. Dịka ọmụmaatụ, dabere na nhazi nke ihe nhazi dị iche iche, yana dị ka nhazi nke teknụzụ nhazi ọrụ dị iche iche. ...
Ngwaọrụ Ngwuputa Ala nke Carbide Cemented
Akụrụngwa maka imepụta ngwa ọrụ ihe eji eme ala ala dị elu bụ ihe WC-Co alloys, na ọtụtụ n'ime ha bụ alloys nwere akụkụ abụọ, ọkachasị alloys na-adịghị mma. Ọtụtụ mgbe dị ka ihe dị iche iche na -egwupụta okwute, ike siri ike dị iche iche, ma ọ bụ ihe dị iche ...